I-China T-i-bolt enomvelisi we-clamp yasentwasahlobo kunye neFektri | Iglasi
Inokuxhotyiswa ngesitovu esisebenza nzima, ngokuthelekisa intwasahlobo yesiqhelo, esilunge ngakumbi kunxibelelwano lombhobho wezixhobo ezishushu ezinamandla.
Ukupakisha okuqhelekileyo yingxowa yeplastiki, ibhokisi yebhokisi yangaphandle Ileyibheli iya kuba sebhokisini.
I-T-bolt eqhelekileyo ene-clamp yasentwasahlobo isetyenziselwa ukuthelekisa uqhagamshelo lwe-hose ye-injini yedizili. Umsebenzi wasentwasahlobo osindayo ofanelekileyo kukufuduswa kweenqwelo-mafutha kwezemidlalo kunye nokuqhagamshelwa kwendlela yokuhambisa umbhobho we-hose.
I-T-bolt ene-clamp yasentwasahlobo ineempawu zokukhawulezisa ukulayisha ngokukhawuleza, kulula ukuyikhupha, ukuxinana okulinganayo, ukuphinda kuguqulwe kwaye kunqunyulwe ngokwemvelo ngocoselelo lwe hose ukufikelela kwisiphumo sokudibana. Yenzelwe ukunyibilika okungqongqo kunye nosetyenziso lweedayimitha ezinkulu ziqhelekileyo kwiilori ezinzima, oomatshini bokushicilela, izixhobo ezingekho kwindlela, ukunkcenkceshela kwezolimo kunye noomatshini.
Edlulileyo: Irubber (yokulungisa iikhampasi)